बस्ती रित्याउने त्यो दुर्घटना- समाचार - कान्तिपुर समाचार
बस्ती रित्याउने त्यो दुर्घटना
सडक दुर्घटना पीडितको सम्झना दिवस
मंसिर १, २०७६ गिरुप्रसाद भण्डारी
प्यूठान — अनुहार मलिन छ । हरपल रसाएझैं देखिन्छन् आँखा । ६१ वर्षीया दीपा अधिकारी रिजाललाई १४ वर्षअघिको दुःखान्तले आज पनि झस्काइरहन्छ । उनी चाहन्छिन्, त्यो घटना दिमागबाट मेटिएर जाओस् । तर अहँ, त्यो त आज पनि उत्तिकै ताजा छ ! उत्तिकै पीडादायी ।
०६१ माघ ८ गते शुक्रबार दाङको देउखुरीबाट बेहुली लिएर प्यूठानको टारीगाउँ फर्केको जन्तीबस गर्जेनीमा दुर्घटनामा परेको थियो । त्यो भयानक दुर्घटनामा परिवारका सबै सदस्य गुमाएकी थिइन्, बुहारी भित्र्याउने प्रतीक्षामा रहेकी बेहुलाकी आमा दीपाले । बुहारी ल्याउन आफूले अन्माएर पठाएको जेठो छोरो लोकराजसहित पति भीमकान्त, कान्छो छोरो माधव, देवर, भान्जा, भतिजालगायत ४१ आफन्तलाई त्यो दुर्घटनाले उनीबाट हठात खोसेको थियो ।
त्यसको एक वर्षपछि दीपाले गाउँको सबै सम्पत्ति बेचेर टारी छोडिन् । दाङको घोराही बजारनजिक एकतले घर किनेर छोरीज्वाइँको रेखदेखमा बस्न थालिन् । १४ वर्ष एक्लै बिताएको घरको एउटा कुनोमा थचक्क बस्दै उनले भनिन्, ‘भित्रभित्रै पोलिरहे पनि बाहिर खाटा बसिसकेको त्यो घाउ अब फेरि नकोट्याऊँ होला बाबु !’ निरन्तरको तनावले उनको रक्तचाप बढेको छ । नियमित औषधि खान्छिन् । रुँदारुँदा दुवै आँखा कमजोर भएका छन् । भर्खरै आँखाको शल्यक्रिया गरेकी छन् । कालो चस्मा लगाएर चिनजान गरेपछि बिस्तारै भनिन्, ‘मेरा लागि मात्र नभएर हाम्रो टारीगाउँकै लागि त्यो कालो दिन थियो ।’
घटनापछि टारीगाउँ पुरुषविहीन भयो । टारीका मात्र २२ महिला विधवा भए । तीमध्ये केहीले दोस्रो विवाह गरे । कति छोराछोरीसहित बसाइँ सरे । दीपाले भनिन्, ‘सिंगो गाउँको खुसी त्यो दिन त्यही एउटा बसभित्र थियो । गर्जेनीमै बिलायो ।’ मृत्यु भएका सबै ४१ जनालाई झिमरुक नदी किनारमा लहरै जलाइएको थियो । सबै मलामीका आँखा नदीजस्तै उर्लिएका थिए । वर्ष दिनपछिको बर्खान्त पनि एकै ठाउँमा सामूहिक रूपमा गरिएको थियो । त्यसलगत्तै दीपाले गाउँ छोडेकी हुन् ।
१४ वर्षअघि प्यूठानको जर्गेनीमा भएको जन्तीबस दुर्घटनामा दुलाहा छोरासहित परिवारका सबै सदस्य गुमाएकी दीपा अधिकारी । तस्बिरः कान्तिपुर
‘१८ वर्षमै जेठो छोरो जन्मेको थियो । बेलैमा जन्मेको छोराले बुढ्यौलीमा सुख देला भनेर एमएसम्म पढायौं । उसैको बिहेमा बज्रपात पर्‍यो,’ दीपा बिस्तारै खुलिन्, ‘ऊ सबैसँग मिल्ने स्वभावको थियो । आफ्नो बिहेमा धेरै जन्ती जानुपर्छ भनेर उसैले धेरै आफन्त बोलाएको थियो । टीकाटालो गरेर पठाएकी थिएँ । बेलुका बुहारीसहित खुसी लिएर फर्केलान् भनेको त सबै कहिल्यै नआउने गरी गए ।’
६० जना जन्ती लिएर गएको बसमा फर्कंदा ५६ जना थिए । तीमध्ये ३३ जनाले घटनास्थलमै ज्यान गुमाए भने पाँच जनाको प्यूठान अस्पतालमा, दुई जनाको बुटवलस्थित अञ्चल अस्पतालमा र एक जनाको भारतको लखनउमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
चालकसमेत १५ जना घाइते भएका थिए । मृत्यु भएकामा टारीगाउँका मात्र २८ जना थिए । दाङका दुई जना र अरू प्यूठानकै पुण्यखोला, विजयनगर र खलंगाका थिए ।
दुर्घटनाको एक वर्षपछि दीपा अधिकारीले छाडेको प्यूठान नगरपालिका–४ स्थित टारीको घर।
घोराही सरेपछि दीपा टारी फर्केकी छैनन् । तर उनको मन टारीबाट अलग्गिएको पनि छैन । ‘यता आएपछि त्यो जमिन, घर, बाहिरी सेरोफेरो त छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर, मनभरि सधैँ टारीगाउँ र आफन्तकै मात्र झल्को आइरहन्छ ।’ सपनामा टारीगाउँको सेरोफेरो र आफन्त देख्दा रमाउने उनी झल्यास्स बिउँझिँदा अर्कै संसारमा आइपुगेजस्तो लाग्ने बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘ब्युँझँदा मसँग आफन्त र टारीगाउँ केही हँॅदैन । दिनभरि कुनामा बसेर एक्लै रुन्छु । कोसँग पीडा सुनाउनु ? सुनाए पनि अब गुमेका कोही फिर्ता हुने होइनन् ।’
रेडियो, टेलिभिजनलगायत सञ्चारमाध्यममा सवारी दुर्घटनाको समाचार सुन्नेबित्तिकै त्यही माघ ८ को सम्झना आउने गरेको दीपाले बताइन् । ‘मैले समाचारमा सुनेजतिका जन्तीबस दुर्घटनाको गन्ती गरेकी छु । ०६१ माघ ८ यता आठवटा जन्तीबस दुर्घटनामा परे,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो जत्रै ठूलो दुर्घटना अन्त भएको छैन । तर पनि भइरहेकै छन् ।’
बाँचेको जीवन उपहार
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएर लामो उपचारपछि बाँचेका प्यूठान नगरपालिका, गेजबाङका शिवराज पण्डितले दुर्घटनापछिको जीवनलाई भगवान्को उपहारका रूपमा लिएको बताए । पण्डितको दाहिने खुट्टा, देब्रे हात र बायाँपट्टिका सातवटा करङ भाँचिएका थिए । ‘दुर्घटना सम्झँदा त्यतिका लासको थुप्रोमा कसरी जीवितै रहिएछ भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘एकअर्कालाई हेर्दाहेर्दै गुमेका आफन्तको सम्झना आउँछ । बरर आँसु झर्छन् ।’ दुर्घटनामा घाइते भएकाहरू सबै अहिलेसम्म जीवितै रहेको पण्डितले बताए । तीमध्ये पाँच जना गाडी खस्दै गर्दा हामफालेर बाँचेका थिए भने आठ जना बससँगै खोलामा झरेका थिए ।
बस दुर्घटना भएको साँघुरो घुम्ती सडक।
सालोको बिहे भएकाले निकै रमाइलो गर्दै जन्ती गएको पण्डितले सुनाए । उनका अनुसार फर्कंदा चालकले गाडी धेरै छिटो कुदाइरहेका थिए । गीत घन्किरहेको थियो । कोही नाच्दै थिए, कोही गाउँदै । बाहिर सिमसिम पानी परेको थियो । ‘अन्दाजी साँझ सवा ६ बजेको हुँदो हो । गर्जेनीको घुम्तीनेर आइपुगेपछि गाडीमा एक्कासि गड्याङ्ग आवाज आएको थियो । त्यसपछि गाडी पल्टिँदै सीधै खोलामा पुगेको सम्झन्छु,’ उनले भने, ‘अरू कुरा त अस्पतालमै पुगेपछि मात्र थाहा पाएँ ।’ त्यो सडक अझै फराकिलो पारिएको छैन । अझै पनि त्यो बाटो भएर यात्रा गर्दा डर लाग्ने गरेको उनले सुनाए । ‘त्यसबेला ग्राभेल थियो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि उस्तै साँघुरो छ । कालोपत्रे मात्रै गरिएको छ ।’
गर्जेनी दुर्घटनाले सिंगो मुलुकको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शोक वक्तव्य निकालेका थिए । जिल्ला विकास समिति, प्यूठानमा भएको सर्वदलीय बैठकले अधिवक्ता रामेश्वर सुवेदीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय स्वतन्त्र नागरिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो । ‘हामीले धेरै दुःख गरेर दुर्घटनाको कारणसहित प्रतिवेदन तयार पारेका थियौं,’ सुवेदीले भने, ‘तर कतैबाट पनि सुझाव कार्यान्वयन भएन । गर्जेनी दुर्घटना भएको १५ वर्ष बित्यो तर अहिले पनि सडक यातायातमा उस्तै लापरबाहीको अवस्था देख्छु ।’ चालकको गाडी चलाउने अनुभव कम भएको, तीव्र गतिमा बस चलाएको, मदिरा सेवन गरेको, साँघुरो सडकका कारण दुर्घटना भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको उनले बताए ।
प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ ०७:१८
काठमाडौँ — शरद भेषावकरको सानदार ८९ रन र विनोद भण्डारीको कीर्तिमानमा नेपालले एसीसी इमर्जिङ टिम्स कपमा पहिलो विजय हात पारेको छ । बंगलादेशमा भइरहेको प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा भारतसँग ७ विकेटले पराजित नेपालले शनिबार हङकङमाथी ४० रनको विजय हात पार्‍यो ।
शरदले क्रिजमा डटेर खेलेपछि नेपाल ढाकास्थित बिकेएसपी ३ मैदानमा पुरा ५० ओभर खेली २ सय १७ रनमा अलआउट भयो। जबाफमा आएको हङकङलाई नेपालले ४५.५ ओभरमा १ सय ७७ रनमा अलआउट गर्‍यो। हङकङको यो लगातार दोस्रो हार हो।
बंगलादेश पहिलो दुई खेल जिति समूह ‘बी’ को शीर्ष स्थानमा छ। भारत जस्तै नेपालको २–२ अंक छ। बंगलादेशले भारतलाई शनिबार भएको खेलमा ६ विकेटले पराजित गरेको थियो। भारतले बनाएको २ सय ४६ रनलाई बंगलादेशले ४३ औं ओभरको पहिलो बलमा पुरा गर्‍यो। नेपालले सोमबार बंगलादेशसँग खेल्ने छ। सेमिफाइनल पुग्नका लागि नेपाललाई सो खेल जित्नै पर्नेछ।
टस हारेर आएको नेपालको सुरुआत राम्रो रहेन। ओपनरद्वय ज्ञानेन्द्र मल्ल र कुशल भुर्तेल सुरुमै पेभेलियन फर्किए। कप्तान ज्ञानेन्द्रले लगातार दोस्रो खेलमा खाता खोल्न सकेनन्। भारतसँगको खेलमा नेपालबाट ‘डेब्यु’ गरेका कुशलले १ रनमात्र जोड्न सके। शरदले उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीसँग तेस्रो विकेटमा ८३ रनको साझेदारी गरे। दीपेन्द्र ६७ बलमा ३ चौका प्रहार गरी ३७ रनमा आउट भए।
आरिफ शेखले शरदलाई बलियो साथ दिए। यी दुईले पाँचौं विकेटमा ७४ रन जोडे। आरिफले ४८ बलमा ३ चौका र ३ छक्का प्रहार गर्दै ४२ रन बनाए। शरद नेपाली इनिङ्सको अन्तिम बलमा आउट भए। उनले १ सय ३९ बलको इनिङ्समा ९ चौका प्रहार गरे। यस बिचमा पवन सर्राफ शुन्य, विनोद भण्डारी १५, करण केसी ७ र सुशन भारी ६ रनमा आउट भए। अन्तिम बलको सामना गरेका ललितनारायण राजवंशी १ रनमा रनआउट भए। हङकङका एइजाज खानले ३ तथा नसरुल्ला राना र इहसान नवाजले २–२ विकेट लिए।
हङकङका सुरुआत निकै खराब रहयो। टोलीले ४७ रन बनाउँदा ५ विकेट गुमाइसकेको थियो। त्यसमा करण केसीले २ र राष्ट्रिय टोलीबाट ५० ओभरमा पहिलो खेल खेलिरहेका अविनाश कर्णले २ विकेट लिए। सबै क्याच विकेटकिपर विनोद भण्डारीको नाममा थियो। उनले अर्को क्याच लिदैं एकै खेलमा ६ शिकार बनाउने पहिलो नेपाली खेलाडी बने।
हङकङबाट किन्चित शाहले ५३ रन बनाए। उनले ८० बल खेल्दै ३ चौका र १ छक्का प्रहार गरे। इहसान नवाज ५३ बलमा ४४ रन बनाई अविजित रहे। नेपालबाट करण र अविनाशले ३–३ विकेट लिए। करणले ९ ओभरमा १ मेडन राख्दै र अविनाशले ९ ओभरमा २ मेडन राखि समान ३२ रन खर्चे। सुशनले २ विकेट लिए।
प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७६ २०:३७
दुई पूर्व डीएसपीसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा